Gudoomiye Jeyte “Ma dhici doonto in dadka leeska dilo oo la’iska jooggo” | Dhacdo
Gudoomiye Jeyte “Ma dhici doonto in dadka leeska dilo oo la’iska jooggo”
Gudoomiyaha Maamulka Gobolka Hiiraan, Cali Jeyte Cismaan ayaa si adag uga hadlay dilkii xalay Magaalada Beledweyne loogu gaystay Gudoomiyihii Ururka Dhalinyarada ee Gobolka Hiiraan, Faarax Cabdi Cali (Faarax Diir).
Rag bastoolado ku hubeysnaa ayaa Gudoomiyaha ku dilay xaafadda Nuur Xawaad, gaar ahaan maqaaxi uu fadhiyay. Saddex qof oo kale ayaa weerarkaasi ku dhaawacantay, iyadoona ay baxsadeen kuwii ka dambeeyay.
Faarax Diir ayaa maanta lagu aasay Magaalada Beledweyne, waxaana aaskiisa ka qaybgalay dadweyne aad u fara-badan iyo Masuuliyiinta Maamulka Gobolka Hiiraan, oo Gudoomiye Jeyte uu ugu horeeyo.
Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan oo aaskaasi ka dib la hadlay Warbaahinta ayaa marka hore tacsi u diray qoyskii, eheladii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuum Faarax Diir.
“Ilaahay baa naxariis iska leh ee Ilaahay ha u naxariisto Faarax Diir. Caa’iladii uu ka baxay, mujtamaca uu asxaabta la ahaa iyo ehelkaba, dhammaan waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan ha’idinka siiyo.” Ayuu yiri Gudoomiyuhu.
Gudoomiyaha ayaa yiri “Geeri aad iyo aad u xanuun badan bay ahayd, dareenkayga siduu yahay Ilaahay uun baa garan karo, laakiin qof walba wuu dhimanayaa, koley wuu dhiman lahaa, gacan ka xaqdaran-na way dhishay. Dad intaa le’eg intaan magaaladaan joogay qof uu aaskeeda ka qaybgalay ma arag.”
Gudoomiyaha ayaa sheegaya inaanay aqbali karin in maalin kasta la’iska dilo dadka haldoorka u ah bulshada, isla-markaana ay baxsadaan dembiile-yaasha.
“Insha’Allah ma dhici doonto in dadka leeska dilo oo la’iska jooggo. Wuxuu dilayaa qofka dadka ugu macnaha roonaa. Ma qof haddii xabad ku dhacdo dhiig ka imaanayn baa jira, qof walba dhiigaa ka imaanayo, taa micnaheeduna waa la wada xanuunsanayaa.” Ayuu yiri Gudoomiyaha.
Cali Jeyte Cismaan, Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan ayaa shacabka ugu baaqay inay baraarugaan, isla-markaana ay meel kaga soo jeestaan kuwa dhiigooda baneystay.
“Shacabka waxaan leenahay ama dadka Soomaaliyeed, sidaanu sax maaha.” Ayuu yiri Gudoomiyaha oo intaa ku daray “Guri walba waxa ku jira waa in la kontoroolo, itaalka Dowladda Somaliya meesha ay doonto ha joogtee ama anaga ha noqoto ama qolo kale oo nala mida ha noqotee, in guri kasta qofka caawa ku hoyday la ogaado.” Ayuu yiri Gudoomiye Jeyte.
Waxa kaloo uu yiri “Waxaan leenahay reer Beledweyne iyo reer Hiiraan, sidaan maya, sidaani nama dhaqdo, sidaani mana dhaqdo. Koley anaga ma fariisan doono, gacmahana ma laaban doonnee, laakiin sidaani idinma dhaqdo.”
Jeyte ayaa yiri “In qofka ugu macnaha roon la dilo maalin walba oo haddana ay dhacdo inaan ficil la muujin oo la yiraahdo Shabaab miyaa, gacmaha la laabto, macno ma sameynayso. Haddii qabaa’ilada Soomaalida qabiil ka mid ah uu dili lahaa nin idinka mid ah, isla xalay magaaladaan waxaa laga dareemi lahaa saan-saan colaadeed.”
Jeyte oo dadka baraarujinayay ayaa yiri “Sidii wax uu yahay waajib lagu faral yeelay haddii Shabaab dilo, dilkaasi uu muqadas ahaa oo kale ayay dadku gacmo deysanayaan. Laakiin waxaan leeyahay oo carabkeyga ku adkeynayaa, war naftu mar bay go’daa, Ilaahay baana xukuma, wax Alle soo dhinac marayna qof uu u imaanayo ma jirto. Qof kastoo Ilaahaygii ku abuuray inta aad aaminto, dulinimada hala iska dulqaado.”